Qormada Caafimaadka Dadweynaha ee Cudurka Buufiska [Depression] – Rasaasa News
Aug 13, 2009 depression, Health
Qormadan maanta ee caafimaadka dadweynaha ayaa waxay ku saabsan tahay, xanuunada lagu bartay dalalka reer galbeedka, balse ayna ummada Somalidu hore u aqoon in uu yahay xanuun xun ama ayna u arki jirinba xanuun, cudurkan ayaa waxaa la yidhaahdaa BUUFIS ama Murugo. Qormadan dhakhtarku waxaa uu ugu talo galay dadka Somalida ah ee ku nool dalalka reer galbeedka, sida ka muuqata qoraalka
Bukaan eegida la xiriirta xaaladaha murugada waxa wehaye dhibaato ku timaada caafimaadka taas oo kula aada meel shishe oo ku dareensiisa “shucuur weyn.” Dhibaatadan waxay saameyneysa qeyb kasta oo noloshaada ka mid ah. Waxaa laga yaaba in aad dareento in aadan ka soo toosin aroortii sariirta, waxaa laga yaaba marmar in aad ka fikirtid dhimasho.
Murugadu waxay kugu dhaci karta, ka dib marka noloshaada ay ku timaado dhacdo sida dhimasho, isbeddel shaqo, cadaadis, dhalmo ama guurid iyo marka wax aad hawo wayn ka qabtay uu noqon waayo sidii aad filaysay. Jiradaan waxay saameeyn karta qof kasta, da’a kasta oo uu ku jiro. Arintani waxay ku abuuri kartaa jiro weyn sida; cudurada keena laleemada [Parkinson].
Murugadu waxay beddeli kartaa niyadaada sida ay tahay iyo fekirkaaga, awooda fekirka aad qabtid marka aad murugooneysid waxay kaa dhigaysaa “naxariis la’aan” waxayna adkayneysa in aad xalisid dhibaatooyinka, waxaa kaa tagi wax kasta oo kalsooni ah.
Calaamadaha Murugada ama Buufiska
Calaamadaha bukaanka murugaysan ma aha mar kasta mid la aqoonsan karo, balse Calaamadahi waxay ka mid yihiin kuwa inta badan lagu aqoonsan karo ruuxa;
Dareemid tiiraanyo ama xanaaq fudud [dareemadaas kama tagaan] 2 todobaad ama ka badan
Waxaa ka luma xiisaha iyo farxada maalinba maalinta ka dambaysa [oo ay ku jirto xiisaha galmoodku]
Rabitaanka cuntada oo uu ruuxu lumiyo iyo Miisaanka oo is dhima
Isbedel dhinaca hurdada sida, hurdo la,aan ama hurdo badanaan
Dareemid nasasho la’aan
Dareemid tabar yaraan
Dareemid rajo-xumo, qiimo lahayn ama dembi
Walbahaar joogto ah, go,aano khaldan
Cabsi joogto ah iyo ka dhuumasho asaxaabta
Dadka oo dhan ayaa ugu muuqda cadow
Jidhka oo aan dawooyinka u jawaabin, si loo daaweeyo
Ka fikir in aad tahay faa,iido laawe
Fekir joogto ah oo ku saabsan dhimasho ama is-dil.
Baaris cafimaad ka dib, bixiyaha daryeelka caafimaadku wuxuu sheegi karaa haddii aad qabtid murugada [buufis], tani macnaheedu ma aha in aad “waallan” tahay. Ama aad tahay qof guul darraystay.
Sida jirooyinka kaleba loo dadweeyo, murugada [buufiska] waa la daweyn karaa, daaweyntu sida caadiga ah waxay noqon kartaa daawo la qaato, la talin iyo is daryeel nafsadeed.
Waxaa jira daawooyin kala gedisan oo loo istic-maalo daaweynta murugada [buufiska]. Adiga iyo daryeelahaaga caafimaadka ayaa go,aan ka gaari kara daawada kuu wanaagsan. Qaado daawada sida uu kuu siiyo daryeelahaaga caafimaadku. Daaweyntaadu waxay qaadan kartaa todobaadyo yar, ka hor inta aad ka dareemaysid caafimaad wanaagsan. Waxaa kale oo laga yaaba in aad u baahatid in daawo beddelatid. Daawooyinka ama aragtida dhakhtarka cilmi nafsiga, kaas oo xirfad khaas ah u leh daawooyinta murugada Buufiska. Fadlan samir u yeesha hawshaan daaweynta waxay qaadanaysa todobaadyo yar.
La Talinta Qabaha Cudurka Buufiska
Waxaa wanaagsan in aad la shaqeysid daryeelahaaga caafimaad ama dhakhtarka takhasuska u leh cudurka maskaxda, kaas oo kaala taliya xanuunka. Waxaa wanaagsan adiga laftigaagu in ka hadasho waxa ku saabsan dareenkaaga, waxa aad ka bixi karta “dhibta” ee aad ka qabtid fekirada diidmada ah. La talinta waxaa kale oo laga yaaba in ay kaa caawiso, si gaar ah waxyaalaha kugu kordhinaya murugada [buufiska].
Si dhab ah u diyaari guusha horumarkaaga:- Bogsiinyahaagu waxaa laga yaaba in ay waqti qaadato. Haddii aad qabtid hawl aad u weyn, waa in aad yaraysaa inta aad ka ladnaanayso xanuunka.
Nafsadaada abaal-mari marka aad guul gaadho. Baro waxa ku saabsan murugada [buufiska]. Daryeelaha caafimaadkaagu wuxuu soo jeedin kara waxyaalo qaarkood akhris yahay. Raadi wax qabadyada caafimaadka wacan, Kuwaas oo ku dareen-siinaya wanaag. Waxaa laga yaaba in aad ka bilowdid waxa aad jeceshahay ama qaado fasalo.
Waxa aad xafidaa wargeyska horumarka Noloshaada. Xusuus qor ku samee waxa ku saabsan waxa adigu aad dareemaysid. Ka fakir waxa ku saabsan dhibaatooyinka asalka u ah xanuunka, dhacdooyin hore, ciirsasho la,aan, dhaqaalo la,aan, masayrkuwaas oo laga yaabo in ay kordhiyaan murugada.
Ka fakir waxa ku saabsan sida aad ugu biiri lahayd, waxbarasho ama kooxaha taageera wax ka qabadka murugada. Bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga waxaa laga yaaba in uu hayo liis ku qoran kooxaha taageeradda ee nawaaxiga aad degan tahay. Samee hawshan sii aad noqotid mid firfircoon ah.
Isku-day in noloshaada ay noqoto mid ku firfircoon bulshada dhexdeeda.
Ka digtoonow waxa ku saabsan isticmaalida:- aalkolada iyo waxyaalaha kale. Aalkolada iyo dejiyaha [dawada hurdada keenta] waxa ay yihiin waxa keena murugada. Waxay ka dhigayaan in murugadaada ay meel xun gaarsiiso. Murugada waxay kuu horseedaysaa in aad qaxwo badan cabtid, sigaar badan cabtid ama aad qaadatid daroogooyin kale kuwaas oo samayn doona in aad si xun wax u dareentid.
Kala hadal bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga, qoyskaaga ama asxaabtaada waxa ku saabsan afkaar kasta oo la xiriirta is-dil oo aad adigu qabtid. Noqo qof samir leh. In aad dareentid wanaag, Waxay qaadan doontaa waqti iyo dadaal.
Jwxo-shiil iyo Beeshiisa oo Yeeshay Shir ay ku Go,aan Qaateen